Wariye ka tirsaan Radio mogadisho oo caawa la dilay iyo shababka oo sheegtay. | raascasayrmedia.com
← madaxwayne diyaano iyo madaxwayne faroole oo ka wada degay boosaaso
waanu ka shakinay deegaanada casayrland inay ku dhawaaqaan maamul ka madax banaan puntland →
May 4, 2010 · 11:03 pm
Wariye ka tirsaan Radio mogadisho oo caawa la dilay iyo shababka oo sheegtay.
Allaha u naxariistee Wariye Shiikh Nuur Abkey oo ka mid ahaa Saxafiyiinta ugu caansan Dalka Soomaaliya mudo dheerna howsha warfaafinta ku soo jiray ayaa caawa meydkiisa la soo dhigay Agagaarka Hotelka Daameey ee Jidka Wadnaha Magaalada Muqdisho aktiisa dib markii la dilay.
Wariyayaal ku sugan Magaalada Muqdisho oo aan caawa qadka telfoonka kula xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyey in meydka Shiikh Nuur Abkeey la soo dhigay Agagaarka Hotelkii Daameey, iyada oo ay ka muuqdaan rasaas.
Shiikh Nuur Abkeey waxa uu ka mid ahaa aas-aasayaashii idaacada Hornafrik, waxa uuna ka qeybqaatay sheekadii xiisaha laheyd ee la oran jiray intuu waqtigu i baday waayuhu haku bado, waxa uuna ku jili jiray Ma Gefe. Hase yeeshee waxaa bahda Saxaafada ay si weyn ugu xasuusataa kaaliontii uu ku laha ahorumarinta wararka iyo barnaamijyada Idaacadaha.
Maamulka Shabakadda allcasayr.com ayaa dhambaal tacsi ah u dirayo Dhamaan bahda Saxaafada iyada oo looga tacsiyeynayo geerida naxdinta leh ee ku timid allaha u naxariistee Wariye Shiikh Nuur Abkeey.
Waaxa dhawaan sheegtay dilka naxariis darada ah ee lagu kacaay wariyaha Somaliyeed Kooxda Allshabab naftiisa u qaar jisaay sowba ugu shaqeen kara Radio Mogadisho.